နှစ်သက်မိသော ရုပ်ရှင်တစ်ကား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » နှစ်သက်မိသော ရုပ်ရှင်တစ်ကား
Posted by mashwetote on Jan 13, 2012 in Critic, Education | 30 comments
movie recommendation ရွှေတုတ်လက်သံ
မနှစ်က စာမေးပွဲအပြီး လုပ်စရာမရှိ၊ အားနေတာနဲ့ အစ်မတစ်ယောက် ပြောတဲ့ Three Idiots (ငပေါသုံးကောင်) ဆိုတဲ့ ဟိန္ဒူရုပ်ရှင်တစ်ခုကို ကြည့်မိတယ်။ ဟိန္ဒူရုပ်ရှင်တွေဆိုရင် ဘာကြည့်ရမှန်းမသိတာရယ်၊ သိပ်အကြိုက်မတွေ့တာရယ်ကြောင့် သိပ်မကြည့်ဖြစ်ပါဘူး။ ဒီရုပ်ရှင်ကိုတော့ သူက အရမ်းရယ်ရတယ် ကြည့်ကြည့်ဆိုလို့ ဘာမှလုပ်စရာမရှိတာနဲ့ပဲ ကြည့်ဖြစ်သွားတယ်။
ကြည့်လိုက်တော့မှ ရယ်ရရုံတင်မက၊ အဓိပ္ပါယ်ပါရှိတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။
ရုပ်ရှင်က (မြန်မာပြည်နဲ့ အတော်ဆင်တူတဲ့) အိန္ဒိယပြည်ရဲ့ ပညာရေးစနစ်ကြောင်းကို ရိုက်ထားတာပါ။ အိန္ဒိယပြည်က စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေရဲ့ ဘ၀ကို အခြေခံပြီးရိုက်ထားတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာ ဇာတ်ဆောင်က စက်တွေကိုမြတ်နိုးလွန်းလို့၊ စက်တွေနဲ့ တီထွင်ရတာကို သဘောကျလွန်းလို့ စက်မှုတက္ကသိုလ်ကို သွားတက်တဲ့သူ၊ “လူကြမ်း” ကတော့ စာကိုမျက်စိမှိတ်ပြီး အလွတ်ကျက်တဲ့စနစ်ကို သဘောကျတဲ့ စက်မှုတက္ကသိုလ်က ပါမောက္ခ။ ဇာတ်ဆောင်မင်းသားနဲ့ သူ့ရဲ့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကတစ်ဖက်၊ “လူကြမ်း” ပါမောက္ခနဲ့ ပါမောက္ခ သဘောအကျဆုံး ရှိသမျှစာ အလွတ်လိုက်ကျက်တဲ့ ကျောင်းသားကတစ်ဖက် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ပညာပေးတဲ့ပုံတွေကို ရယ်စရာကောင်းအောင်ရိုက်ပြထားတာပါ။ တစ်ခန်းနှစ်ခန်းလောက်မှာ မျက်ရည်ကျရပေမယ့် အဓိပ္ပါယ်ရှိပြီး ကြည့်ပျော်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားလေးပါ။
ဒီရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်း ဖတ်စာအုပ်ထဲရှိသမျှစာကို အလွတ်ကျက်ရင် ဂုဏ်ထူးထွက်တဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ ပညာရေးစနစ်ကို သွားသတိရမိလို့ပါ။ ပြီးတော့ ရွာသားတွေလည်း ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်။
Three Idiots Hindi Movie Download
Three Idiots Hindi Movie Watch Online (ရုပ်ရှင် ကွာလတီ အာမမခံပါ။)
ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရမှာ ဆိုတော့ စိတ်ကလေးတော့ရှည်မှရမယ်နော့်။ Online မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ပိုကြာမယ်ထင်တာပဲ။ ပြည်မြန်မာက ရွာသားတွေ အတွက်ပြောတာပါ။ ရုပ်ရှင်က ၂နာရီ ၄၅မိနစ်လောက်ရှည်ပါတယ်။ အချိန်မပေးနိုင်ရင်လည်း တစ်ပိုင်းစီကြည့်လို့ရပါတယ်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်က အိန္ဒိယပြည်မှာ နာမည်ကျော်တဲ့ ရုပ်ရှင်ပါ။ ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်လိုက်နော်။
မရွှေတုတ် has written6post in this Website..
My name is မရွှေတုတ် I am notaစလုံးတရုတ် I like to do မဟုတ်တရုတ် I also like to ကျွေးသမျှအကုန်အုပ်
View all posts by mashwetote →
အချိန်တစ်နာရီလောက် အားနေတာနဲ့ အတော်ဘဲ
၀ဲလ်ကမ်းပါ ကိုပေ။ ကိုဘလက်ချောပြောသလို အချိန်တစ်နာရီနဲ့ဆိုရင်တော့ ကျော်ခွကြည့်ပေါ့နော်။ ကုလားကားဆိုတဲ့အတိုင်း သီချင်းဆိုပြီးကတာတွေက ခပ်ရှည်ရှည်ရယ်။
အဲဒီ ကုလားကား မြန်မာပြည် အခပေးချယ်နယ်တွေက
ရှားရှားပါးပါး အကြိုက်တွေ့မိသော ကုလားကားပါဗျာ။
အဲဒီကား ရဲ့တစ်ဝက်လောက်မှာ မန်ယူပွဲလွှင့်တာ မှတ်မိနေတယ်။
မန်ယူပွဲကိုတောင် မကြည့်ပဲ အဲဒီကားကို ဆုံးအောင်ကြည့်ခဲ့ရလောက်အောင်
တော်တော် ကြီးလည်း ရယ်ရပါတယ်။
ညီမလေး ရွှေတုတ် ပြောတဲ့ ကုလားကားကောင်းတယ်ဆိုတာကို
လမ်းဘေးဆိုင်တွေမှာ ချက်ခြင်းဝယ်ကြည့်လို့ ရပါတယ်ဗျာ။
ကဲ ခုချက်ခြင်း ကြည့်ကြစေဗျာ။
“လမ်းဘေးဆိုင်တွေမှာ ချက်ခြင်းဝယ်ကြည့်လို့ ရပါတယ်ဗျာ။”
အဲဒီလိုလား? ကောင်းပါတယ်။ ခုနင်ကတင်ပြီးမှ တော်ကြာ ရုပ်ရှင်က သုံးနာရီ၊ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရတာက တစ်နေကုန်နေရင် ခက်မယ်လို့ စဉ်းစားနေတာ။
အေမီလည်း ကြည့်ပြီးပြီ။ အခပေးလိုင်းကဆိုတော့ မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ပြည့်ဝဝလည်း သိရတယ်………….အရမ်းသဘောကျတဲ့ကားလေးပါ။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာ အဲကားရဲ့ fanpage မှာတောင် like လုပ်ထားလိုက်မိသေးတယ်။ ရီလည်း ရီတယ်…….အယူအဆ သဘောတရားလေးတွေကို လည်းအရမ်းကြိုက်တယ်။ မကြည့်ရသေးတဲ့သူတွေလည်း ကြည့်သင့်တဲ့ကားကောင်းလေးပါ။
အေးလေ ကျော်ခွရစ်ကြည့်ရင်တော့ အဆင်ပြေမှာပါဗျာ။
အဲဒီကား ကြည့်ပြီးပြီ .. အပိုင်ဝယ်ထားပါတယ် .. တော်တော်လေးကြည့်ကောင်းလို့ သူများတွေကိုညွှန်းပေးဖြစ်ပါတယ် … ကုလားကားထဲမှာ တော်တော်ကောင်းတဲ့ဇာတ်ကားပါပဲ …
My name is Kham ဆိုတဲ့ ကုလားကားလဲ ကောင်းတယ် ….
ကြည့်ဖူးတဲ့သူတွေ အများကြီးပါကလား။ ကြည့်ပြီးလည်း ထပ်ကြည့်နော် မဝေ။
အဲဒီဇာတ်လမ်းကြည့်တုန်းက ကုလားအသံထွက်နဲ့ တရုတ်စာတန်းထိုးနဲ့ကြည့်ခဲ့ရတာမို့ မှတ်မှတ်ရရဖြစ်နေတာ … အင်္ဂလိပ်စာတန်းထိုးပါတဲ့ DVD ရရင်တော့ လိုချင်သား …
မြန်မာစာတန်းထိုးတော့ထွက်တယ်။ တခွေ ၃၀၀။
မဝေပြောတဲ့ My Name is Kham ဆိုတဲ့ကားလည်း အချိန်ရရင် ကြည့်ပါဦးမည်။
မဝေ ပြောသလိုပဲ my name is knam ဆိုတဲ့ကားက တကယ်ကောင်းတယ် ကျမဆို ကြည့်ပြီး ငိုတောင်ငိုတယ် အခု three idiots ရောပဲ ကြိုက်တယ်… ရီရလို့
လူပြောများတာနဲ့ဝယ်ကြည့်မိတာ။ ရီလိုက်ရတာဝက်ဝက်ကွဲ။ ကုလားကားဆိုပျင်းလို့မကြည့်တာ။ ဒီကားကတော့အပိုင်ဝယ်ပြီးထပ်ထပ်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ ကြည့်တိုင်းလဲရီရတယ်။
ဟုတ်တယ်။ ရွှေတုတ်လည်း ကုလားကားဆို ကြည့်ကိုမကြည့်ဖြစ်တာ။ ဒီတစ်ကားပဲ သူများပြောလို့ ကြည့်ဖြစ်တာ။
တောင်မရေး အားရေးလည်း ကြည့်မယ်
ကြိုက်ပါ။ ကြည့်ပါ။ ၀မ်းသာပါတယ်။ ဒီကားထဲမှာ ခါလီ ခါလီ ဆိုတာလေးလည်း မှတ်မိသေးတယ်။
ဟင်.. မရွှေတုတ် ရွာထဲမှာလည်း အပေါသုံးကောင်ရှိတယ်..
ကိုရင်ဂီ့၊ ကိုရင်စည်၊ ကိုရင်ပေါက်တဲ့..
ကြင်နာတတ်တာ.. ဒါတွေကို မိုးလေးအသိ…
မှတ်ထားမယ် မှတ်ထားမယ်။ ရွှေတုတ် ဂေဇက် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန် သိုင်းကျမ်းပြုစုရင် ဒီသုံးယောက်လည်း မပါပဲမနေဘူး။
ကိုရင်စည် တယောက် နှူးဘာဂိုဏ်းရဲ့ ဂုဏ်တွေ လာဖော်နေပါလား ဟရို့ …
မိုးလေးဆိုတာ မိုးယံဆန် ကိုပြောဒါလား ဂျ ……(ခိခိ…)
မရှူးရှဲရေ … အဲ့လေ မရွှေတုတ်ရေ …
ကိုရင်ဂီက လက်ဖက်ကိုအားပေးတာလား ရွှေတုတ်လက်သံကို အားပေးတာလားတော့ မသိဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူး။
သများလဲ ကြည့်ချင်လို့ ..ဒီအိတ်ခ်ျအယ်လ် နဲ့ ပို့ ပေးပါ.ပို့ ပေးပါ
၀န်ဆောင်ခကို သဂျီးဆီက တောင်းလိုက်ပါ..တောင်းလိုက်ပါ..တောင်းလိုက်ဘာ..
မာမီပေါက်ကိုပို့ပေးဖို့ ဒီအိတ်ခ်ျအယ်လ်ဖိုးတော့ မတတ်နိုင်ဘူး။ နောက်မှ Bird Park က ငှက်တစ်ကောင်သွားခိုးပြီး ခြေထောက်မှာဆွဲပေးလိုက်မယ်။ မကြာမီ လာမည် မျှော်…
အင်္ဂလိပ်စာတန်းထိုးကို တစ်ပိုင်းတစ် ကြည့်ဖူးတယ်
မြန်မာလို စာတန်းထိုးကို Sky Net တစ်စွန်းတစ်စ မြင်လိုက်ရတယ်
အွန်လိုင်းက အပြည့်လည်း မလိုချင်ဘူးးးးးးးးးး
မြန်မာစာတန်းထိုး တစ်ခွေ ၃၀၀တဲ့ ကြည့်ချင်သူများ မသဲနုအေးဆီမှာ စာရင်းပေးပါ။
ဟုတ်တယ် အဲ့ဒီ ဇာတ်လမ်းကို အရမ်းသဘောကျပါတယ်။
ကျနော်တို့တွေ လုပ်နေကြတာတွေနဲ့လဲ ထပ်တူနီးနီး ကျနေတာကိုး
ပိုဆိုးတာက ကျနော်တို့ကမှသူတို့လောက် မကြိုးစားသေးဘူး
နောက်ပြီး ဇာတ်လမ်းထဲမှာ မင်းသမီး နဲ့ စေ့စပ်ထားတဲ့ လူကို သရုပ်မှန်ပေါ်အောင် လုပ်ပြတဲ့ အခန်းလေးတွေလဲကြိုက်တယ်။း)
JackSkellington လဲစမ်းကြည့်ပါလား အဲဒီနည်းလေးတွေ
mashwetoke လက်သံပြောင်ပါပေတယ်။ ပယ်ပယ်နှယ်နှယ် ဘာသာပြန်လိုက်တာ ငပေါ၃ကောင်တဲ့။ ဟာသလူရွှင်တော်၃ယောက်ဆိုလည်း ဟုတ်တုတ်တုတ်။
idiot ဆိုတော့လည်း ငပေါပေါ့ ဦးနေးချားရယ်။ ဟာသလူရွှင်တော်၃ယောက်ဆိုရင် နာမည်ကရှည်နေပြီးတော့ သိပ်လည်းမတိကျသလိုပဲလေ။ ငပေါ၃ကောင်ဆိုတော့ တိုတိုနဲ့လိုရင်း ရောက်သပေါ့။
လက်ဖက်မှာ ရွှေတုတ်ဆိုတော့ မရှုးရှဲ လို့ပဲ နာမည်ပြောင်းခေါ်ရမလိုတောင် ဖြစ်နေပြီ
ရွှေတုတ်လက်သံဆိုပါကလားးးးး ဝေါင်ဝေါင်ရှေး ဝေးဝေးက ရှောင်မှ
ဝေါင်ဝေါင်ရှေးတောင် ရှေးတဲ့အထိ ကြားရမယ့် ရွှေတုတ်လက်သံနော်။ ပြောင်သလားမေးနဲ့ ဦးသိန်းစိန်ခေါင်းတော် အရှုံးပေးသွားရမယ်။ ငှဲ ငှဲ ငှဲ